कामरेडको नेपालपथ « Sansar News
२९ माघ २०७५, मंगलवार १३:३१
‘यो विशेष जिल्लाको बैठकमा सभापतित्व गरिदिनु हुन म कमरेड शुद्धोधनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ कमरेड निर्मलले सभापतित्व सहित बैठक सुरुवाती गर्न खोजे ।
‘कमरेडहरू विषयवस्तु नदोहोरिने गरी पार्टीका समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले आ–आफ्ना धारणा राख्न फ्लोर ओपन गर्दछु ।’ सभापतिले कासन गरे ।
‘आज हाम्रो पार्टीका एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यले बडो शालिनताका साथ केही प्रश्न उठाउनु भएको छ कामरेड, उहाँको स्प्रिटको सह्राना गर्दछु ।’ कमरेड विमलाले फ्लोरबाट सुरु गरिन् ।
‘आज हाम्रो पार्टी र जनताविचको सम्बन्ध टाढिदै गएको छ, हाम्रा चुनावी बाचाहरू खोक्रो आश्वासनमा रुपान्तरित हुने डर बढिरहेको छ । जनताले आशा गर्न छाडेको स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौं ।’ कामरेड हुतराजले भनाई राखें ।
‘हो त कामरेड, देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, त्यसमा पनि महिला र चर्चित जननेताकी अर्धाङगिनी हुनुहुन्छ । खेती हेर्नका लागि हेलिकप्टरमा शयर ठिक लागेन, हिँजोका राजाहरू पनि कतिपय फिल्डमै पुगेर किसानका मर्का बुझेका उदाहरण छन् । सुरक्षाका नाउँमा सेवा सुविधा अचाक्ली बढाइएको छ । जनताले यो रुचाएकै छैनन् । हेलिकप्टर र सुरक्षाका लस्कर गाडीमा ठूलो खर्च भएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री र अरु देशका नेता देखाएर हाम्रा राष्ट्रपति तथा ठूलावडाको खिल्ली उडाइएको छ’ कामरेड रोहनले भनाई राखे ।
‘के गरेको होला त्यस्तो पनि, संसदलाई पूरै मान्छु भन्ने नेताले संसदको लेखा समितिलाई अमान्य बनाउँदै फेरि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुहुन्थ्यो र…? छानविनलाई सहज हुने गरी बाटो बनाएर निकास देखाएको हुनुपथ्र्याे नी !’ कामरेड रुद्रले भनाई राखे ।
‘मन्त्री क्वाटरमा बस्ने, वा भाडाको लागि पैसो लिने, आफ्नो घरमा बस्ने, भाडाको पैसा बुझ्ने, राजदूत नियुक्ति गर्दा पैसो बुझाएको भनेर हल्ला आउँदा पनि चुप बस्ने, विधि, पद्धति र नीतिमा रहेर न्यायिक ढंगले राजनैतिक नियुक्ति नगर्ने, नेतादेखि सांसदको सचिवालय पूरै नीजि र नीजित्वमा कैद गर्ने, आफन्तहरूको तलब भत्ता बुझ्दा पनि प्रक्रिया नपु¥याउने आदी इत्यादीको बदनामीले आज हामी मलिन हुन बाध्य छौं’ कामरेड जीतेन्द्रले तथ्य राखें ।
‘कम्युनिष्ट पार्टीको नेता हुने अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीगिरी र दलालीगिरी गरिरहने, सत्ता र पहुँचको प्रयोग गरेर ठेक्कापट्टा हातमा लिने, पैसा बुझाएर सांसद र मन्त्रीसम्म बन्ने जस्ता कुरा पनि आइरहेका छन् । हामी कसरी शुद्धिकरणमा जान सकौला’ कमरेड श्रृष्टिले जिज्ञासा राखिन् ।
‘निर्वाचनका बेला जनताको ढाड सेक्ने, कार्यकर्ताको शरीर निमोठ्ने तर सेवा सुविधा दिने बेला आफन्त र परिवारभित्र सिमित गर्ने यो बेथितिले समाजवादमा लैजान्छ कि निकृष्ट व्यक्तिवादमा ?’ कमरेड तिर्थले प्रश्न गरे ।
‘एकातिर सांसदको सपथ खुवाउने, त्यो पनि जेलबाट सांसद ल्याइर माला लगाउँदै सम्मान गर्ने, दुई चार बाक्यको सपथ दिएपछि फेरि जेल नै पठाउने….! लोकलाई यस्तो रमिता देखाउने बाध्यता कहाँबाट आइप¥यो कामरेड ?’ कामरेड निर्मलाले खुल्दुली व्यक्त गरिन् ।
‘शिक्षामा सुधारको लागि आन्दोलनको नौटंकी नगर्ने अनि मालिककोमा पुगेर पैसा लिएपछि सम्झौता गरेर तुहाउने ? भ्रष्ट संस्कृति हामीले नै हुर्काएका छौं । पार्टी र आन्दोलनमा यो प्रवृत्ति अहिले महारोग बनेको छ । कसरी सुर्धान सकिएला कामरेड…? कामरेड गम्भीरमानले भनाई राखे ।
‘कामरेडहरू आज मुलुकले रुपान्तरण खोजेको हो । व्यक्ति र प्रवृत्तिको सकारात्मक र समाजवाद उन्मुख रुपान्तरण चाहेको हो । यो माथिबाटै खोेजेको हो । के अहिले माथिबाट यस्तो संचार भएको छ त ? माथि नभएपछि तल किन र कसरी ? प्रश्न जटिल र गम्भीर बन्दै गएको छ’ कामरेड थानप्रसादले चिन्ता व्यक्त गरें ।
‘हो, कमरेडहरू, आज निकै महत्वका प्रश्न उठेका छन् । भर्खर मात्र हाम्रा एक केन्द्रीय सदस्य कामरेडले यी सबै विषयबस्तु समावेश गरी खुल्लै अपिल गर्नुभएको छ । पार्टीका बिभिन्न तहमा घनिभूत छलफल हुँदैछन् । मैले तपार्ईहरूका यी चासो र सुझावलाई नोट गरेर प्रदेश कार्यालयमार्फत् पार्टी स्थायी समिति हुँदै सचिवालयमा पु¥याउने प्रयत्न गर्नेछु, आसा गरौं कामरेडहरू । हामीले अझै धैर्य गरौं ।’
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिले अनुरोध गरे, सहभागीहरूले ताली बजाए ।